တိုက်ခန်းပရိဘောဂ၊ ရုံးသုံးသစ်သားပရိဘောဂများ၊ သစ်သားခွေးသေတ္တာများ - Hilison
ခေတ်သစ်ရှေးဟောင်းဒီဇိုင်း ၄ လွှာသစ်သားစာအုပ်စင်၊ ...
စာအုပ်များ၊ ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်များ၊ လက်မှုပညာ၊ ပန်းအိုးများနှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့ ၂ မျိုးလုံးကိုနေရာ ချ၍ သုံးနိုင်သည်။ desktop သိုလှောင်ခန်းသည်ပိုသပ်ရပ်သည်။ သင်၏စာအုပ်များ၊ ဖိုင်များစသည်တို့ကိုစုစည်းပါ။ ၃။ ဤသိုလှောင်ရုံသည်အသုံးဝင်သောဇိမ်ခံစနစ်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးအာကာသနှင့်နေရာယူသည်။
၁။ ဤလက်ရာမြောက်သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အားသက်တောင့်သက်သာနှင့်နွေးထွေးသောအိမ်ကိုပေးနိုင်သည်။ ၂။ ဤသစ်သားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အိပ်ရာသည်ကြောင်နှင့်ခွေးများအတွက်ကုတင်ငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးသုံးနိုင်သည်။ ၃။ ဤအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အိပ်ရာ၏ပစ္စည်းသည်အရည်အသွေးမြင့်ပရုတ်သစ်သားဖြစ်သည်၊ သဘာဝသစ်သားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်အလွန်ရှင်းလင်းသည်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်ညီပြီးကျန်းမာသည်။ 4. S အရွယ်အစားသည်သင့်တော်သည်။
၁။ ကုန်ကျစရိတ်များလာသောအခါအမှုန်ပျဉ်များသည်အစိုင်အခဲတောအုပ်များထက်စျေးပိုသက်သာမည်မှာသေချာသည်။ ဤမျှလောက်တတ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းမှာ၎င်းတို့ကို block board နှင့်အထပ်သားများမှထုတ်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၂။ အပိုင်းဘုတ်သည်သမားရိုးကျသစ်သားနှင့်အထပ်သားများထက်စျေးပိုသက်သာပြီး ပို၍ တူညီသည်။
ထုတ်ကုန်ဓာတ်ပုံအစိုင်အခဲသစ်သားဘောင်ကိုအရည်အသွေးမြင့်သတ္တုဘောင်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားပြီးဝန်တင်နိုင်စွမ်း ၆၀၀ ကီလိုဂရမ်ကျော်သည်။ ဆိုဖာကိုသန့်ရှင်းစေရန်အ ၀ တ်ကိုဖယ်ရှား။ လျှော်နိုင်သည်။ အရွယ်အစားသိပ်သည်းဆမြင့်မားသောပြန်လည်မြှင့်တင်နိုင်သောရေမြှုပ်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းခြင်း၊ ၀ တ်ဆင်နိုင်စွမ်းနှင့်တာရှည်ခံနိုင်ခြင်း ရုရှားနိုင်ငံမှတင်သွင်းသောထင်းရှူးကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ပုံသည်တည်ငြိမ်ခိုင်ခံ့သည်။
ရိုးရာဒီဇိုင်းသည်ဤထုတ်ကုန်ကိုမည်သည့်ဧည့်ခန်းသို့မဟုတ်ဧည့်ခန်းတွင်မဆိုနာမည်ကြီးစေသည်။ ရွေးချယ်ထားသောအရည်အသွေးမြင့်ပိတ်စများ၊ ဂရုစိုက်ရလွယ်ကူမှု၊ သိပ်သည်းဆမြင့်မားပြီးခံနိုင်ရည်မြင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ရေမြှုပ်ကူရှင်များ၊ နူးညံ့သောအထိအတွေ့နှင့်ကြာရှည်အသုံးခံခြင်း ခိုင်ခံ့မှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှု-သင်ထိုင်သောကူရှင်သည်ခိုင်ခံ့ပြီးခိုင်ခံ့သည်။ သင်နစ်မြုပ်မှာကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး၊ သင်ထိုင်လေလေ ...
ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ပုံ၊ စားပွဲခုံကိုအရည်အသွေးမြင့်အစိုင်အခဲသစ်သားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ မြင့်မားသောအပူချိန်၊ ခံနိုင်ရည်အားကောင်းပြီးတာရှည်ခံသည်။ စားပွဲဘေးမှာအခဲသစ်သားချိတ်တွေပါရှိပြီးကျောပိုးအိတ်တွေ၊ နားကြပ်တွေနဲ့အခြားအရာတွေကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့စနစ်တကျချိတ်ဆွဲထားနိုင်တယ်။ နှစ်ထပ်အံဆွဲဒီဇိုင်းသည်သိုလှောင်မှုကိုပိုမိုအဆင်ပြေစေသည်။ အစိုင်အခဲသစ်သားခြေထောက်များသည်ပါးစပ်ပုံသဏ္,န်၊ stron ...
ကလေးများအတွက်စာသင်ခုံနှင့်ထိုင်ခုံအစုံ ids ကလေးများ ...
ဘက်စုံသုံးဒီဇိုင်းအစိုင်အခဲသစ်သားစင်၊ နှစ်ထပ်အံဆွဲ၊ ဘေးချိတ်၊ အောက်ခြေစင်၊ ဘက်စုံသုံးသိုလှောင်မှု၊ စုံလင်စွာစုစည်းထားသောပစ္စည်းများ၊ အဆင်ပြေသောသင်ယူမှုနှင့်ရုံးခန်းအခြေအနေ။ အဝိုင်း၊ ပြားချပ်ချပ်နှင့်ကြီးမားသောစားပွဲခုံသည်စားပွဲခုံကိုခိုင်ခံ့သောသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကျိုးပဲ့လွယ်ခြင်းမရှိ၊ တည်ငြိမ်ပြီးတာရှည်ခံသောကလေးများပါ ၀ င်သည်။ သိုလှောင်ရုံကြီး ...
အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုထုတ်ကုန် ၅- လွှာသစ်သားစာအုပ်စင် ...
ထမင်းစားခန်း၊ ဧည့်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့်အိပ်ခန်းအတွက်သန့်ရှင်းပြီးခေတ်မီသောဒီဇိုင်းဖြင့်သိုလှောင်ထားသောပရိဘောဂများ ဘက်စုံသုံးသိုလှောင်မှုသည်စာအုပ်များတင်ရန်သာမကအခြားအရာဝတ္ထုများကိုပါသိုလှောင်ရန်ပိုအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play တစ်ခုဖြစ်ပါစေ။ သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရည်အသွေးမြင့်သန္ဓေသားသည်နေ့စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။ လိုအပ်သောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ညွှန်ကြားချက်များပါ ၀ င်သောကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ပုံတပ်ဆင်မှု ...
သစ်သားအင်္ကျီ ဦး ထုပ်ရပ်ခြင်း၊ ခေါက်နိုင်သောသစ်သား Cl ...
၁။ အလေးချိန်ကြီးမားသောတည်ဆောက်မှု၊ အရည်အသွေးမြင့် lacquered သစ်သားဝက်အူများ၊ ခြေ ၄ ချောင်း၊ တည်ငြိမ်မှု၊ လေးလံသောအဝတ်အစားများနှင့်အ ၀ တ်အစားမျိုးစုံအတွက်ပံ့ပိုးမှု ၂. စုဝေးရန်လွယ်ကူခြင်း - မည်သည့်ကိရိယာမှမလိုအပ်ပါ။ လိုအပ်သောကိရိယာများနှင့်ရှင်းလင်းသောတပ်ဆင်မှုညွှန်ကြားချက်လက်စွဲသည်တစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုသူများအားရှင်းရှင်းလင်းလင်းလမ်းညွှန်သည်။
သစ်သားပရိဘောဂလုပ်ငန်း၌အတွေ့အကြုံပြည့်ဝသောကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်နည်းပညာ ၀ န်ထမ်း ၃၀ ကျော်ပါ ၀ င်သောအဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပြည့်စုံ။ အကျိုးရှိသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်ပြီးကွဲပြားသောနိုင်ငံများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးအရည်အသွေးကောင်းထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
မြန်ဆန်သော Delivery အချိန်
အများအားဖြင့်အော်ဒါအသစ်အတွက်အမြောက်အများထုတ်လုပ်ရန် ၃၅ ရက်ခန့်ကြာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် link တစ်ခုစီကိုအချိန်မီအာမခံနိုင်ရန်ရင့်ကျက်သောကုန်ကြမ်းထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ရှိသည်။ လစဉ်စွမ်းရည်သည် ၁၀၀၀၀၀ အစုံရောက်နိုင်သည်။
ရောင်းအားကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှု
screw များကဲ့သို့အခမဲ့အသုံးအဆောင်များကိုကွန်တိန်နာဖြင့်ပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကျွမ်းကျင်မှုများ၊ အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းများ၊ စိတ်ကြိုက် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အရောင်းအဖွဲ့အားကောင်းမှုရှိသည်။
၂၁ ရာစု၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်လျှင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသတင်းဆိုးများ၏တိုက်ခိုက်မှုကိုရင်ဆိုင်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာများ၏အရင်းအမြစ်များကိုယခင်ကထက်ပိုမိုသိနေသော်လည်းကွေးကွေးရှေ့သို့မရောက်နိုင်ဟုခံစားရသည်။ အဲဒါကငါတို့ဖြေရှင်းဖို့အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့အကြောင်းအရင်းတစ်ခုပဲ ...
သစ်သားပရိဘောဂများရဲ့နွေးထွေးမှု၊ ကြွယ်ဝမှု၊ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်မလိုက်ဖက်သောအိမ်ထောင်စုဧရိယာမရှိပါ။ စားပွဲများ၊ ထိုင်ခုံများ၊ ဘောင်များ၊ စင်များ၊ အံဆွဲများ၊ ဗီရိုများနှင့်အဆင်တန်ဆာများပင် - အိမ်ရှိသစ်သားပရိဘောဂများ၏အားသာချက်များကိုလွန်ကဲစွာ ပြော၍ မရပါ။ အများအားဖြင့်သစ်သားသည်ထူးခြားသောအရာကိုပေးသည်။
၁။ သစ်သားပရိဘောဂများသုံးပါကနေရောင်တိုက်ရိုက်ထိရန်နေရောင်ခြည်ကိုရှောင်သင့်သည်။ ပြင်းထန်သောခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည်သုတ်ဆေးကိုအရောင်မှိန်စေပြီးသစ်သားပရိဘောဂများ၏အသွင်အပြင်ကိုထိခိုက်စေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အပူအရင်းအမြစ်၊ အပူဓာတ်၊ မီးအိမ်များနှင့်မီးအိမ်များနှင့်အခြားအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများသည်သစ်သားပရိဘောဂများကိုပုံပျက်စေလိမ့်မည်။
Xiamen Hilison Furniture Co. , Ltd ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အနှစ် ၂၀ ကျော်၊ ၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောစားသုံးသူရာပေါင်းများစွာကိုတည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပြီး၊ အဆက်မပြတ်သုတေသနပြုလုပ်ကာကြီးမားသော data archive စာကြည့်တိုက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်အဆင့်မြှင့်ထားသောထုတ်ကုန်ဖြေရှင်းနည်းများ၊ suite၊ ပရိဘောဂများ၊ ပျဉ်ထောင်ပရိဘောဂများ၊ မွေ့ယာများ၊ ဆိုဖာများ၊ ပျော့ပျောင်းသောအိပ်ရာများ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂများနှင့်အင်ဂျင်နီယာပရိဘောဂများစသည်တို့ကိုပိုမိုစားသုံးသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအိမ်ဘ ၀ ကိုဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်ဖန်တီးခဲ့သည်။
စားပွဲ၊ ထိုင်ခုံ၊ စာအုပ်စင်၊ အိပ်ရာနှင့်အခြားသစ်သားအိမ်ပရိဘောဂများကိုသင်၏စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးထုတ်လုပ်သည်။
OEM & ODM ၀ န်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရိဘောဂအမျိုးမျိုးအတွက်ကျွမ်းကျင်သော QC များစွာရှိသည်၊ ကုန်ကြမ်းမှနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်သို့တင်းကြပ်သောစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်သေချာသည်။